२५ वर्षदेखि एमालेको ‘लालकिल्ला’ बुटवल : दुई नेताको द्वन्दका कारण लज्जास्पद हार ! | Diyopost - ओझेलको खबर २५ वर्षदेखि एमालेको ‘लालकिल्ला’ बुटवल : दुई नेताको द्वन्दका कारण लज्जास्पद हार ! | Diyopost - ओझेलको खबर
दियो पोस्ट आइतबार, जेठ ०८, २०७९ | १६:३७:१७
बुटवल । बुटवललाई नेकपा एमालेको ‘किल्ला’ भनिन्थ्यो । किनभने बुटवल उपमहानगरपालिकाको स्थानिय सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालले २५ वर्षसम्म एकछत्र गरेको थियो ।
तर, एमालेको किल्ला भनिएको बुटवलमा नेपाली कांग्रेसले झण्डा गाडेको छ । उपमहानगर प्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका खेलराज पाण्डे ७ हजार ५ सय ३३ मतान्तरले विजयी भएका छन्न् । २०५४ मा झन्डै ४ हजार मतान्तरले नेकपा एमाले विजयी भएको थियो । त्यस्तै ०७४ सालमा २४ सय मतान्तरले कांग्रेसलाई एमालेले नै पराजित गरेको थियो । तर, यो निर्वाचनमा भने दोब्बर मतान्तरले एमाले पराजित भएको छ ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका विष्णु पौडेलको क्षेत्रको रुपमा चर्चित बुटवलमा नेकपा एमाले किन पराजित भयो भन्ने विषय यतिबेला चर्चाको विषय बन्न थालेको छ ।
निर्वाचन परिणामपछि बुटवलमा विभिन्न विषय चर्चामा आउन थालेको छ । खासगरि लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलबीचको टकराबलाई चर्चामा ल्याउन थालिएको छ । बुटवललाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बनाउँछु भन्दै २०७४ सालमा भोट मागेका विष्णु पौडेलले प्रदेश राजधानी बनाउन सकेनन् । उनकै पार्टीका महासचिव शंकर पाखरेलको जोडबलमा राजधानी सरेर दाङ पुग्यो । रुपन्देहीका विष्णु पौडेल र दाङका शंकर पोखरेलका बीचको यो टकराब नै एमाले पराजित हुनुको प्रमुख कारण रहेको एमाले भित्र चर्चा हुन थालेको छ ।
त्यसो त लुम्बिनी प्रदेशको टिकट वितरणमा उपाध्यक्ष पौडेल भन्दा महासचिव शंकर पोखरेल हाबी भएको कारण चुनावमा जनमत भाँडिएको समेत विश्लेषण छ ।
पौडेलले बुटवलमा आफू निकट अर्कै व्यक्तिलाई मेयरमा ल्याउन चाहेका थिए । तर, शंकर पोखरेलले बाबुराम भट्टराईलाई टिकट दिलाइदिए ।
‘महासचिव पोखरेलले अर्काको क्षेत्रमा आएर खेल्न थाल्नु भयो । यो गम्भिर गल्ति हो । यसले दिर्घकालिन असर पार्छ,’ नेकपा एमालेका एक नेता भन्छन् ।
दुई नेताबीचको द्वन्दका कारण एमालेले सैनामैना नगरपालिकामा पनि नेतृत्व गुमाएको छ । सैनामैना नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका फणेन्द्र प्रसाद शर्मा विजयी भएका छन् । शर्माले १५ हजार ६ सय ८६ मत पाए भने एमालेका चित्र बहादुर कार्कीले १५ हजार १ सय ५ मत ल्याए । उपमेयरमा भने एमालेकी विना रानाले बाजी मारेकी छिन् ।
बुटवल उपमहानगर, सैनामैना, तिलोत्तमामा उम्मेदवार छनोटमा पोखरेल हाबी भएको एमाले वृत्तमै चर्चा छ । यसअघि एमालेको बर्चश्व रहेको कन्चन नगरपालिका, कोटहीमाइ गाउँपालिका पनि एमाले शुन्य छ ।
बुटवलका नेता भोजराज श्रेष्ठले पनि पोखरेल र पौडेलबीचको द्वन्दका बुटवलमा पराजय भोग्नु परेको बताए ।
‘कांग्रेसले घोषणा गरेको अस्थायी राजधानी एमालेले जोगाउन नसक्नु र निर्वाचितले विकाससँग जनतालाई जोड्न नसक्नु नै पराजयको मुख्य कारण हो,’ उनले भने, ‘हामीले अघिल्लो पटक राजधानी यहीं राख्छौं भनेर भोट मागेकै हो, राख्न नसकेपछि जनताले पत्याएनन् ।’
आइतबार, जेठ ०८, २०७९ | १६:३७:१७